Ukuphakamisa Magnets - China Ningbo Sine
Izimiso Model PML Permanent Magnet ophakamisa has indlela oqinile magnetic ezivezwa NdFeB izinto kazibuthe. On futhi Valiwe endleleni kazibuthe ilawulwa turning isibambo inhlukano PML unomphela lifters kazibuthe babe uzibuthe njengoba amandla, namandla alo ephakamisa akasoze buthaka.
Ngo yokulayisha athula, nophakamisa kungaba ukuphakamisa yensimbi / amabhlogo steel, amasilinda nabanye ungene izinto kazibuthe ngoba nokuxhumanisa uxhumano. Kuyinto elula kakhulu okuba akusebenzise ukulayisha, athula, futhi ezihambayo. PML unomphela lifters kazibuthe kukhona ekahle kakhulu ephakamisa indawo izimboni, echwebeni, emafektri kanye zokuthutha.
Kancane futhi Ngokuhlakanipha olwakhiwe, lula isicelo, la mandla kazibuthe amandla eqinile Lokuhehako futhi iphephile ekusingatheni.
Vula bese Download umkhiqizo ikhathalogu ophakamisa kazibuthe
Olandelayo: embizeni Magnets